no ho hita miasa eny amin’ireny sampandraharaham-paritra ao fa tsy olona avy any amin’ny faritra ivelany. Matoa anefa ny mpitondra fanjakana foibe nametraka ireny talem-paritra isan-karazany any amin’ny faritra ireny dia ny hialana amin’ izay adim-poko izay no tanjona. Paikady iray hanafoanana ny kolikoly ihany koa io. Mety hanjaka mantsy ny kolikoly raha ireo zanaky ny faritra ihany no alefa miasa ao amin’ny faritra niaviny. Misy zanaky ny faritra Atsinanana, ohatra, miasa sy monina any amin’ny faritra andrefan’ny nosy na any atsimo saingy tsy mbola nahenoana feo ireo foko hafa. Marihina moa fa olom-bitsy ireo fantatra fa mivoy resaka adim-poko ao Toamasina ireo. Miantso ny fandraisan’andraikitr’ireo manam-pahefana araka izany ireo mponina ao Toamasina mba hijery akaiky ny zava-misy. Mety hanimba ny filaminana tadiavin’izy ireo mantsy izany sady tsy mifanaraka amin’ny fivoaran’ny toetrandro intsony ihany koa.